Law Protecting the Privacy and Security of Citizens – Free Expression Myanmar
Tag Archives: Law Protecting the Privacy and Security of Citizens
မြန်မာ့ အသရေဖျက်မှုဥပဒေများကို ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီရန် ပြုပြင်ရေးအတွက် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်စရာ လမ်းကြောင်းများ Visit defamation reform website >> ဤအစီရင်ခံစာသည် အသရေဖျက်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ထုတ်ဝေသော စာစဥ်များတွင် တတိယမြောက် အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။ ပထမတစ်အုပ်တွင် အသရေဖျက်မှုဥပဒေများကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ မည်သို့ တလွဲအသုံးပြုနေသည်ကို ရေးသားခဲ့ပြီး ဒုတိယတစ်အုပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရှေးရှုသင့်သည့် နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤတတိယစာအုပ်၌ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အလားတူနိုင်ငံများတွင် မည်သို့ ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံကို အနှစ်ချုပ်တင်ပြထားပြီး မြန်မာအစိုးရ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းများကိုလည်း အဆိုပြုထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီအသွင်စတင် ကူးပြောင်းသည့်
Dec 10, 2020 by Coordinator in Publications ထုတ်ဝေစာများ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသရေဖျက်မှုဥပဒေများသည် ဒီမိုကရေစီနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေကြောင်း လွှတ်တော်၏အသိအမှတ်ပြုမှုကို ပြသသော်လည်း ဝေဖန်ထောက်ပြသူများအား အပြစ်ပေးအရေးယူနေသည့် အခွင့်အာဏာကိုမူ ဤနိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေး ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မှ ရပ်တန့်စေလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ထိုကြောင့် ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကို ပိုမိုအကျယ်တဝံ့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေး ဥပဒေအား ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ရက် တွင် လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဌာန်း ခဲ့သည်။ မူလ “နိုင်လွတ်လုံ ဥပဒေ ”(၂၀၁၇)သည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ အပေါ် အထိန်းအကွပ်မဲ့ စောင့်ကြပ်မှုအား ကာကွယ်ရန် အပေါ်ယံသွင်ပြင်လောက်သာ
Sep 07, 2020 by Coordinator in News သတင်း
Download the full report Defamation? International standards and Myanmar’s legal framework » Myanmar is not the first country to startatransition to democracy. It follows many others, most of which have found that reforming defamation laws wasacritical first step to democracy. Without
May 03, 2019 by Coordinator in Publications ထုတ်ဝေစာများ